Hay’adda NISA oo weriye HAARUUN MACRUUF la xariirisay arrimo khatar ku ah amniga qaranka | XORRIYA NEWS
Home Wararka Hay’adda NISA oo weriye HAARUUN MACRUUF la xariirisay arrimo khatar ku ah...
Hay’adda NISA oo weriye HAARUUN MACRUUF la xariirisay arrimo khatar ku ah amniga qaranka
Harun Maruf qoraa ahna weriye ka howl gala laanta Afka-Soomaaliga ee VOA
Hay’add Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay inay “tallaabada ku habboon ee sharciga ah ka qaadeyso” weriye Haaruun Macruuf oo ka mid weriyayaasha ka howl-gala laanta Af-Soomaaliga ee VOA.
Qoraal ay soo dhigtay barta twitter-ka ayey NISA ku sheegtay in Haaruun Macruuf uu “leeyahay xiriiro khatar ku ah amniga qaranka, kuna kacay falal ka baxsan anshaxa warbaahinta,” sida lagu sheegay qoraalka.
Qoraal ay NISA soo dhigtay bartooda Twitter ka
Qoraalka NISA ma bixin wax faah-faahin oo ku saabsan xiriirada lagu eedeeyey Haaruun Macruuf iyo waxa ay yihiin.
Haaruun Macruuf ayaa waxa uu caan ku yahay in inta badan uu ka warramo arrimaha amniga, gaar ahaan kooxda Al-Shabaab iyo weerada ay fuliso, isaga oo qoray buug si gaar ah uga hadlaya Al-Shabaab.
Waxa uu sidoo kale leeyahay barnaamij sameeya baaritaanada oo lagu magacaabo “Galka Baarista”, kaasi oo marar badan baahiyey, banaankana soo dhigay xogo ka qarsoon shacabka, oo qaarkood ku saabsan musuq-maasuq ka dhex jira hay’adaha dowladda iyo gaabsi dhanka ah amniga ah oo ka muuqda hay’adaha amniga dowladda. Haaruun Macruuf weli kama jawaabin warka caawa kasoo baxay NISA. Hase yeeshee, waxaa cad in arrinta aysan ka marnaan doonin VOA oo uu ka shaqeeyo, maadaama ay tahay hay’ad ay leedahay dowladda federaalka Mareykanka.